Jọn Nke Mbụ 3:1-24
Anyị bụ ụmụ Chineke (1-3)
Ihe e ji amata ụmụ Chineke na ụmụ Ekwensu (4-12)
Jizọs ga-ebibi ọrụ Ekwensu (8)
Hụnụ ibe unu n’anya (13-18)
Chineke karịrị obi anyị (19-24)
3 Nna anyị hụrụ anyị n’anya nke ukwuu+ wee kwe ka a kpọọ anyị ụmụ Chineke.+ Ọ bụkwa ihe anyị bụ. Ma ụwa amaghị anyị+ n’ihi na ụwa amatabeghị ya.+ 2 Ndị m hụrụ n’anya, anyị bụ ụmụ Chineke ugbu a,+ ma e mebeghị ka ihe anyị ga-abụ pụta ìhè.+ Anyị ma na mgbe a ga-eme ka onye ahụ pụta ìhè, anyị ga-adị ka ya n’ihi na anyị ga-ahụ ya otú ọ dị. 3 Onye ọ bụla nke nwere olileanya a n’ebe ọ nọ na-eme onwe ya ka ọ dị ọcha+ ebe ọ bụ na onye ahụ dị ọcha. 4 Onye ọ bụla nke na-eme mmehie na-emebi iwu, mmehie bụkwa mmebi iwu. 5 Unu makwa na e mere ka onye ahụ pụta ìhè ka e wee wepụ mmehie anyị,+ mmehie ọ bụla adịghịkwa ya n’ime. 6 Onye ọ bụla nke ya na ya dị n’otu anaghị anọgide na-eme mmehie.+ Onye ọ bụla nke nọgidere na-eme mmehie ahụbeghị ya, ọ matabeghịkwa ya. 7 Ụmụntakịrị, unu ekwela ka onye ọ bụla duhie unu. Onye na-eme ezi omume bụ onye ezi omume, otú onye ahụ bụkwa onye ezi omume. 8 Onye na-eme mmehie si n’Ekwensu n’ihi na Ekwensu si ná mmalite* na-eme mmehie.+ Ọ bụ ya mere e ji mee ka Ọkpara Chineke pụta ìhè, ka o bibie ọrụ Ekwensu.+ 9 Onye ọ bụla bụ́ nwa Chineke anaghị anọgide na-eme mmehie+ n’ihi na mmụọ* Chineke dị n’ime onye ahụ, o nweghịkwa ike ịnọgide na-eme mmehie n’ihi na ọ bụ nwa Chineke.+ 10 Ọ bụ ihe a ka e ji amata ndị bụ́ ụmụ Chineke na ndị bụ́ ụmụ Ekwensu: Onye ọ bụla na-anaghị eme ezi omume esighị na Chineke, onye na-ahụghị nwanna ya n’anya esighịkwa na ya.+ 11 N’ihi na ihe a bụ ozi unu nụrụ ná mmalite, na anyị kwesịrị ịhụ ibe anyị n’anya.+ 12 Anyị ekwesịghị ịdị ka Ken, onye si n’ajọ onye ahụ, onye gbukwara nwanne ya.+ Gịnị mere o ji gbuo ya? Ọ bụ maka na ọrụ ya jọrọ njọ,+ ma ọrụ nwanne ya dị mma.+ 13 Ụmụnna m, ya ejula unu anya na ụwa kpọrọ unu asị.+ 14 Anyị ma na ọ dịbu ka ànyị nwụrụ anwụ, ma anyị dị ndụ ugbu a,+ n’ihi na anyị hụrụ ụmụnna anyị n’anya.+ Onye na-ahụghị ụmụnna ya n’anya dị ka onye nwụrụ anwụ.+ 15 Onye ọ bụla nke kpọrọ nwanna ya asị bụ ogbu mmadụ,+ unu makwa na e nweghị ogbu mmadụ ga-enweta ndụ ebighị ebi.+ 16 Anyị si otú a mata ihe bụ́ ịhụnanya, n’ihi na onye ahụ nyere ndụ* ya n’ihi anyị,+ anyị kwesịkwara inye ndụ* anyị n’ihi ụmụnna anyị.+ 17 Ma onye ọ bụla nke nwere akụ̀ nke ụwa a ma ya ahụ na e nwere ihe na-akpa nwanna ya, ma o kweghị emetere ya ebere,* olee otú ọ ga-esi ekwu na ya hụrụ Chineke n’anya?+ 18 Ụmụntakịrị, anyị kwesịrị ịhụ ụmụnna anyị n’anya, ọ bụghị n’okwu ọnụ ma ọ bụ n’ire,+ kama n’omume+ nakwa n’eziokwu.+ 19 Anyị ga-eji ihe a mata na anyị si n’eziokwu, anyị ga-emekwa ka obi sie anyị ike na Chineke hụrụ anyị n’anya 20 n’agbanyeghị ihe ọ bụla nwere ike ime ka obi anyị na-ama anyị ikpe, n’ihi na Chineke karịrị obi anyị, marakwa ihe niile.+ 21 Ndị m hụrụ n’anya, ọ bụrụ na obi anyị anaghị ama anyị ikpe, obi ga-esi anyị ike ịgwa Chineke okwu.+ 22 Anyị na-enweta ihe ọ bụla anyị rịọrọ ya+ maka na anyị na-eme ihe o nyere n’iwu, na-emekwa ihe dị mma n’anya ya. 23 N’eziokwu, ihe a bụ ihe o nyere n’iwu: ka anyị nwee okwukwe n’aha Ọkpara ya bụ́ Jizọs Kraịst+ ma hụ ibe anyị n’anya,+ otú o nyere anyị n’iwu. 24 Ya na onye na-eme ihe o nyere n’iwu dị n’otu, onye ahụ na yanwa dịkwa n’otu.+ Anyị makwa na anyị na ya dị n’otu n’ihi mmụọ nsọ o nyere anyị.+
^ Ma ọ bụ “si na mgbe ọ malitere.”
^ Na Grik, “mkpụrụ.” Ya bụ, mkpụrụ nke na-amịpụta ihe.
^ Ma ọ bụ “enwere ya ọmịiko.”